Rice University - Study in USA. Fampianarana an-tany hafa Magazine
fanafohezan-teny : WMRU
Créé : 1912
Aza adino ny discuss Rice University
Rice University dia miankina andrim-panjakana izay naorina tamin'ny 1912.
Saram-pianarana saram in Rice University dia $45,000 (Aprox.).
Rice University, miorina ao am-Houston ny Museum District, manolotra ny mpianatra mavitrika ny fiainana ao amin'ny firenena fahaefatra-tanàna lehibe indrindra. The Rice Coffeehouse, Valhalla Pub sy ny Pub Willy rehetra dia mpianatra-mihazakazaka fanatitra andrim-panjakana amin'ny-toeram-pianarana sakafo sy zava-pisotro. Alohan'ny hanitsaka tongotra amin'ny toeram-pianarana, mpianatra rehetra dia voatendry ho iray 11 toeram-ponenana oniversite, ny izay mitoetra ho mpikambana na dia manapa-kevitra ny hifindra eny fonenan'ny mpianatra. Ny trano fonenana oniversite manome trano, fisakafoana, ary akademika sy hetsika ara-tsosialy. Ny vorondolo Rice mirehareha 14 varsity NCAA Division I fanatanjahan ekipa ary fanta-daza noho ny mahery baolina fandaharana. Mpianatra mahazo tapakila maimaim-poana ny zava-mitranga rehetra varsity fanatanjahan.
Rice dia ahitana valo sekoly, anisan'izany ny Sekoly Siansa Sosialy, Sekolin'ny Humanities sy Wiess Sekoly ny siansa momba ny zavaboary. Ny sekoly nahazo diplaoma dia ahitana ny tena laharana Jesse H. Jones Graduate School of Business sy George R. Brown School of Engineering. Rice koa dia manana tsara-noheverina Sekoly maritrano sy ny Mpiandry Sekoly Music. Rice no an-trano ho any amin'ny James A. Baker III Institute for Public Policy, ny nonpartisan mihevitra fa tanky, izay manome coursework, fiofanana sy ny lahateny. Rehefa misy tsy miankina mpitsongo nahita ny nangalarina Rice vorondolo mascot amin'ny sekoly mpifaninana Texas A&M in 1917, dia naniraka ny kolaka izany hafatra hiverina any Rice mpianatra famelana azy ireo hahafantatra fa “Sammy” dia OK, dia toy izany no bestowing anarana amin'ny sekoly ny mascot.
Susanne M. Glasscock School Mitohy Fianarana
Tompon'ny Liberal Fianarana
Teny Anglisy ho toy ny teny fampiasa faharoa (ESL)
Kajy amin'ny solosaina, ary Applied Matematika
Ancient Mediterane sivilizasiona
Center for Critical ary ny Kolontsaina Tsangan-kevitra
Center for ny Fianarana ny Vehivavy, Gender, sy ny firaisana ara-
Chao Center for Asian Fianarana
Classical sy Eoropeanina Fianarana
Moyen tany am-boalohany Modern Fianarana
politika, lalàna, ary Social Thought
fahantrana, Rariny sy ny Human Capabilities
Espaniola, portogey, ary Amerika Latina Fianarana
Visual Arts sy Tsinjo
Rice Education Program ny fandraharahana
Rice mpanatanteraka Education
Rice MBA for mpitantana
Ny Mpiandry Sekolin'ny Music
Wiess Sekolin'ny siansa momba ny zavaboary
fandroson'ny ara-pahalalana Sciences
Fialam-boly Center for ny Fianarana ny Texas
Kinder Institute for Urban Fikarohana
Shell Center for fampandrosoana maharitra
Interdisciplinary sy ny hafa Academic Programs
Ankoatra nentim-paharazana Borders Initiative
Kajy amin'ny solosaina, Siansa sy Engineering
Rice Education Program ny fandraharahana (Bar)
In 1911 dia nametraka ny vato fehizoro ho an'ny Institute trano voalohany, ny Administration Building, ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe Lovett Hall ho fanomezam-boninahitra ny mpanorina filoha. tamin'ny Septambra 23, 1912, ny tsingerintaona William Marsh ny famonoana Rice, ny William Marsh Rice Institute mba hampandrosoana ny taratasy, Science, ary Art Mazava ho azy fa nanomboka ny asa. 48 lahy sy 29 vehivavy mpianatra voasoratra anarana, tsy mandoa saram-pianarana, amin'ny kilasy nampianarin'ny am-polony sampam-pianarana. Mahazatra fa ny fotoana, Rice nanaiky coeducational Admissions.
Administration Building, Rice Institute, Houston, Texas (carte postale, Vita ny fanoratana 1912-1924)
Telo herinandro taorian'ny fanokafana, ny mahatalanjona akademika iraisam-pirenena natao tao fety fankalazana, mitondra Rice ho ny sain'ny akademika manontolo izao tontolo izao. Efa-taona taty aoriana, tamin'ny voalohany fiandohan lanonana, 35 mari-pahaizana licence ny diplaoma sy mari-pahaizana maîtrise iray no loka. Izany taona, ny mpianatra tena nifidy ny hanaraka ny Voninahitra System, izay mbola misy ankehitriny. Ny voalohany dia niresaka doctorat ao amin'ny 1918 amin'ny mathematicianHubert Evelyn Bray.
Nandritra ny Ady Lehibe II, Rice Institute no iray amin'ireo 131 kolejy sy ny anjerimanontolo amin'ny firenena izay nandray anjara tamin'ny V-12 Navy College Training Program dia nitondra fanatitra mpianatra ny lalana ho amin'ny Navy asa nanirahana.
Ilay nanorina ny Fahatsiarovana Statue, ny varahina sarivongana ny mipetraka William Marsh Rice, mitana ny am-boalohany ho an'ny drafitra ny fonenan'ny mpianatra, Notokanana tamin'ny 1930, ary nametraka ao amin'ny foibe akademika QUAD, miatrika Lovett Hall. Ny sarivongana dia norafetiko ny John Angel. Ny toeram-ponenana rafitra oniversite naroson'ny Filoha Lovett no nolaniana tao 1958, miaraka amin'ny toeram-ponenana Hall Atsinanana lasa Baker College, Hall South-ponenana becomingWill Rice College, West Hall lasa Hanszen College, ary ny vonjimaika Hall Wiess lasa Wiess College.
In 1959, ny Rice Institute Computer nandeha an-tserasera. 1960 nahita an'i Rice Institute tamin'ny fomba ofisialy anarana William Marsh Rice University. Rice nanao toy ny mpanelanelana vonjimaika ao amin'ny famindrana ny tany eo Nanetry Tena menaka sy fanadiovana Company sy NASA, fa ny fananganana ny NASA sambon-danitra ny nisian'ny Center (antsoina ankehitriny hoe Johnson Space Center) in 1962. Ny Filoha John F. Kennedy Ary nanao kabary tao Rice Stadium reiterating fa ny United States natao ho tonga ny volana alohan'ny faran'ny ny folo taona ny taona 1960, ary “mba ho tonga mpitarika izao tontolo izao-toerana fiompy firenena”. Ny fifandraisana amin'ny NASA amin'i Rice University sy ny tanànan'i Houston dia nitoetra mafy amin'ny andro ankehitriny.
Tany am-boalohany sata an'i Rice Institute nanonona fa niaiky ny anjerimanontolo sy hampianatra, andoavam-bola, “ny fotsy mponina any Houston, ary ny toetry ny Texas”. In 1963, ny filan-solaitrabe ny Rice University nametraka fitoriana mba hamela ny oniversite mba manova ny fitsipika fototra iorenany mba hiaiky ny mpianatra avy amin'ny foko rehetra sy handidy saram-pianarana. In 1964, Rice tamin'ny fomba ofisialy ny oniversite Sata ahitsy mba desegregate ny nahazo diplaoma sy undergraduate fisaratsarahana. Ny mpitandrim-pananana ao amin'ny Oniversiten'i Rice dia nahery tao amin'ny fitoriana ny mahafoana ny teny ara-poko ao amin'ny hatoky 1966. Rice Nanomboka mamaly ny saram-pianarana ho an'ny voalohany amin'ny 1965. Tamin'izay taona, Rice nandefa $33 tapitrisa ($248 tapitrisa) fampandrosoana fampielezan-kevitra. $43 tapitrisa ($262 tapitrisa) dia nitaiza ny famaranana amin'ny 1970. In 1974, roa ireo no nanorina sekoly vaovao tao Rice, ny Jesse H. Jones Graduate School of Management sy ny Mpiandry Sekoly Music. Ny Brown Foundation Challenge, ny bola-hanangana fandaharana natao mba hampaherezana fanomezam-pahasoavana isan-taona, natomboka in 1976 ary nifarana in 1996 rehefa nanangana $185 tapitrisa ($279 tapitrisa). Ny Rice School ny Siansa Sosialy Niorina tamin'ny 1979.
Ao amin'ny trano fonenan'ny mpianatra tao-fotsiny ho an'ny olona ny voalohany efa-polo taona. Jones College no voalohany ny fonenan'ny vehivavy ao amin'ny tobim-pianarana Rice, arahin'ny Brown College. Araka ny angano, ny vehivavy ny kolejy dia ny tanjona tsara toerana ny mifanohitra amin'ny farany ny oniversite avy any amin'ny efa misy ny kolejy olona ho toy ny fomba fiarovana oniversite mahamety amin, izay sarobidy indrindra avy Edgar Odell Lovett, izay tsy namela na dabilio mba hapetraka eo amin'ny toeram-pianarana, satria matahotra izy ireo “mety hitarika ho mpiara-fraternization ny vavy”. Ny lalana mampitohy ny avaratra kolejy any amin'ny foibe ny toeram-pianarana dia nomena ny lela-in-takolany anaran'ny “Virjiny ny Walk”. Coeducational oniversite tsirairay lasa teo 1973 ary 1987, amin'ny tokan-tena-firaisana ara-nofo gorodona ny kolejy izay efa azy lasa mpiara-ed amin'ny 2006. By dia, toeram-ponenana vaovao maro kolejy efa naorina amin'ny toeram-pianarana mba hiatrehana ny oniversite ny fitomboan'ny, anisan'izany Lovett College, Sid Richardson College, ary Martel College.
Ny ara-toekarena Summit ny Firenena mandroso Natao tao Rice in 1990. In 1993, ny James A. Baker III Institute for Public Policy noforonina. In 1997, ny Edythe Bates Old Grand Taova sy fitanisana Hall sy ny Foibe ho an'ny Nanoscale Siansa sy ny Teknolojia, anarana in 2005 fa ny faramparan'ny Loka Nobel sy Rice Profesora Richard E. Smalley, Notokanana tao Rice. In 1999, ny Center for biolojika sy ny tontolo iainana Nanotechnology noforonina. Ny Rice vorondolo ekipa baolina dia laharana #1 ao amin'ny firenena noho ny voalohany tamin'ny taona io (1999), mitana ny toerana ambony ho an'ny valo herinandro.
In 2003, ny ostritsa no nandresy ny tompon-daka nasionaly voalohany amin'ny baolina, izay ny voalohany ho amin'ny oniversite Na izany na tsy ekipa fanatanjahantena, nikapoka Southwest Missouri State eo amin'ny lalao fanokafana, ary avy eo ny Oniversiten'i Texas sy Stanford University indroa isan-teny an-dalana ho any amin'ny anaram-boninahitra. In 2008, Ny Filoha David Leebron namoaka-teboka folo drafitra mitondra ny lohateny hoe “Fahitana ho an'ny taonjato faharoa” Lazao drafitra mba hampitombo ny fikarohana bola, hanamafy orina efa misy fandaharana, ary hampitombo ny fiaraha-miasa. Ny drafitra dia nitondra ny onjam-oniversite iray hafa fanorenana, ao anatin'izany ny fananganana ny anarana vao BioScience Research fiaraha trano (natao mba hahatonga ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mifanila Texas Medical Center), fialam-boly vaovao foibe sy ny nohavaozina Autry Fitsarana kianja basket, ary ny koa ny toeram-ponenana vaovao roa kolejy, Duncan College sy McMurtry College.
Nanomboka tamin'ny faramparan'ny 2008, ny oniversite heverina ho toy ny Fampitambarana amin'ny Baylor College of Medicine, na ny Fampitambarana dia farany nandà in 2010. Safidio ny Rice undergraduates amin'izao fotoana izao antoka fieken-keloka ho Baylor College of Medicine eo diplaoma izay tafiditra ao amin'ny Rice / Baylor Medical manam-pahaizana fandaharana. Araka ny History Profesora John Boles’ vao haingana boky University Builder: Edgar Odell Lovett sy ny fanorenan'izao ny Rice Institute, filoha voalohany tany am-boalohany ho an'ny fahitana ny oniversite anisan'ny fanantenana ho an'ny hoavy mpitsabo sy ny lalàna sekoly.
Ianao ve mila discuss Rice University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Rice University ofisialy Facebook
Rice University Hevitra